Pety Rakotoniaina : «Tsy hamalifaty raha nirotsaka hofidiana»
(niseho ny 13/10/2006 )
Kandidà faha-6 nametraka tamin’ny fomba ofisialy ny antontan-taratasy firotsahana tao amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, omaly maraina, ny kadidà Rakotoniaina Pety. Notsiahiviny taorian’izany fa ny fampitomboana ny harinkarena faobe sy ny fanatsarana ny fidiram-bolan’ny isam-batan’olona, miainga amin’ny zava-misy no tanjony. Tsy hisy, noho izany, ny fanilikilihana ny hafa fa hatao kosa izay hampandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra amin’ny fitondrany ny fahaizany sy ny traikefany avy. «Ny olona no harena ary tsy mendrika ny fireharehana ho manam-bola be manoloana izao fahantran’ny Malagasy izao», hoy izy, satria «tsy ny vola no mampandroso fa ny olona».
Mbola nohamafisiny koa fa tsy ny hamalifaty no nijoroany sy nirotsahany fa ny hampivondrona sy hanambatra ny vahoaka malagasy mba tsy hamerenana ny fahadisoan’ireo teo aloha. Heveriny ho anisan’izany ny «fanapahan-kevitra tsy matotra sy tsy fahaizana mampandray anjara ny manampahaizana malagasy».
Tsy manana olana amin’ny Mfm
«Raiamandreniko Atoa Manandafy Rakotonirina ary tsy manana olana aminy aho», hoy ihany Atoa Rakoniaina Pety manoloana ny fanoloran’ny Mfm azy ho kandidà. Aminy, tsy ny adihevitra amin’ny raharahan’ny Mfm na ny fikambanana no zava-dehibe fa ny fanarenana ny firenena ary tsy atokisany hahavita izany intsony ny Filoha am-perinasa. Nomarihany fa fanapahan-kevitra noraisin’ny ampahan’olona tao amin’ny Mfm no nandrotsaka ny filoha nasionalin’ny antoko. Ny hany fahavalony sy ny Tambatra dia ny fahantrana.
Momba ny fiarahan’izy sy ny Jeneraly Randrianafidisoa kosa dia nantitranteriny fa efa misy ary mitohy, araka ny efa niseho tao amin’ny kianjan’ Ampasambazaha, Fianarantsoa sy tamin’ny haino aman-jery. Nanotrona teny Ambohidahy kosa ireo ray aman-dreny niteraka azy mivady sy ny avy any an-tanàna, niaraka tamin-dRtoa vadin’Itompokolahy Germain Rakotonirainy sy Atoa Beza Seramila (birao politikan’ny Mfm).